Real Madrid Oo Guusheedii 20 Aad Oo Xidhiidh Ah Ka Soo gaadhay Kooxda Almeria Oo Ay Marti U Ahayd | Radio Baidoa
Guriga Sports Real Madrid Oo Guusheedii 20 Aad Oo Xidhiidh Ah Ka Soo gaadhay...
Kooxda Real Madrid ayaa guusheedii 20 aad oo xidhiidh ah ka soo gaadhay kooxda Almeria oo ay marti u ahayd, waxayna guushan ku soo gaadhay 4:1, waxaana goolasha u kala dhaliyay Isco, Bale iyo Ronaldo oo laba gool dhaliyay.
Real Madrid ayaa marti u ahayd kooxda Almeria, waxayna Madrid ka fikiraysay inay soo gaadho guusheedii 20 aad oo xidhiidh ah tartamada oo dhan.Kooxda Carlo Ancelotti ayaa ku jirta qaab ciyaareed aad u fiican iyagoo habeenkii arbacada garaacay Ludogorets waxayna noqday kooxda kaliya ee sannadkan Champions Leaquega heerkiisa group-yada kulamadii la ciyaaray wada guulasyatay.
Kulanka caawa waa kulankooda ugu danbeeya ka hor inta aysan u safrin Morocco oo aysan ka qeyb galin koobka Club World Cup iyagoo semi-finalka la ciyaari doona midkood kooxda Mexico Cruz Azul ama Western Sydney Wanderers ee Australia.
Madrid ayaana ciyaarta ku bilaabatay qaab gaabis ah halka Almaria ay bilawgii ciyaarta heshay fursado dhawr ah oo ay goolal ku dhalin kari lahayd laakiin difaaca Madrid iyo Casillas ayaa u babac dhigay weerarka Almeria. Daqiiqadii 34 aad ayuu Isco kooxdiisa Real Madrid hogaanka u dhiibay kadib markii uu gool qurux badan ka dhaliyay Almeria. Ciyaarta ayaana noqotay 1:0 ay Madrid hogaanka ciyaarta ku qabatay.
Almeria ayaana markeeda si deg deg ah kaga jawaabtay goolka ay Real Madrid kaga hormartay, waxaana daqiiqadii 39 aad gool gantaal ah u dhaliyay Verza. Verza ayaana goolkan ka dhaliyay meel ka baxsan xerada ganaaxa Real wuxuuna si layaableh goolka Madrid ugu darbeeyay kubbad ka soo booday difaaca Madrid halkaana wuxuu ku soo celiyay goolka ay Real Madrid kaga hormartay, ciyaarta ayaana noqotay barbaro 1:1 ah.
Laakiin farxada Almeria ayaana sii waarin waxaana saddex daqiiqo kadib gool madax ah Real Madrid u dhaliyay Gareth Bale ciyaarta ayaana noqotay 2:1 ay markale Real Madrid hogaanka kula wareegtay. qaybtii hore ee ciyaarta ayaana ku soo dhamaatay 2:1 ay Real Madrid ciyaarta ku hogaaminayso.Bale ayaana Offside ku jiray marka uu goolka dhaliyay balse calan walaha ayaan wax jawaab ah bixin.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay labada kooxoodba soo bandhigeen ciyaar wanaagsan waxaana daqiiqadii 61 aad Almeria loo dhigay rekoodhe kadib markii uu Marcelo qalad ku galay Mendez oo xerada ganaaxa Real Madrid ku jira, garsooraha ciyaarta ayaana tilmaamay inay rekoodhe tahay. Verza ayaana kooxdiisa Almeria ka qasaariyay fursad ay ciyaarta ugu soo laabi lahaayeen waxaana ka badbaaiyay goolhaye Casillas.
Daqiiqadii 81 aad ee ayuu Ronaldo dhaliyay goolka saddexaad ee Real Madrid, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 3:1 ay Madrid ciyaarta hogaankeeda ku dheeraysatay. Ronaldo oo intii ay ciyaartu socotay aan soo bandhigin qaab ciyaareed fiican isla markaana kaadhka digniinta ah loo taagay ayaa ugu danbayn fursad hadiyad ah ka helay Karim Benzema kaas oo goolka oo banaan u hordhigay.
Markale ayuu Ronaldo daqiiqadii 89 aad ee dhamaadkii ciyaarta kooxdiisa Real Madrid u dhaliyay goolka afraad isaga oo ciyaarta ka dhigay 4:1 waxayna ugu danbayn ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 4:1 ay Real Madrid ku gaadhay guusheedii 20 aad ee isku xigta.